China WPC sintra epurasitiki machira vagadziri uye vanotengesa | Gokai
WPC Sintra Plastic Sheet, iyo zvakare yakatumidza kuti Wooden Plastic Composite bhodhi, ndeimwe yekusika chikamu chePVC furo bhodhi. WPC furo bhodhi inogadzirwa nePVC resin uye huni hupfu iyo yakasanganiswa pane imwe chiyero, yakawedzerwa neakasarudzika ekuwedzera nefomura yepamberi, yakapupirirwa furu uye yakadzvanywa pakukwirira kwepamusoro pakupedzisira kuita pepa.
WPC Sintra Plastic Sheet ine pfungwa yehuni, asi haina mvura uye moto-unoregedza. Iko kutsiviwa kwakanaka kwehuni, plywood, kuveura ndebvu uye kunyangwe Medium Density Fiberboard (MDF).
Chakanakira WPC Sintra Plastic Sheet
Iko kutaridzika uye kunzwa kwakafanana neiyo yematanda huni. Inoda kugadziriswa kushoma uye kugadziriswa, sezvo isingakanganise / kupeta kana kutsemura kuita zvidimbu zvidiki senge zvakasikwa
2.Iyo inopokana zvakanyanya nehunyoro uye, nekudaro, yakasimba zvinhu.
3.Iinewo kupokana nemujuru nefungi.
4.Hairore nyore nyore uye haina kudzikira kana kurasikirwa neyakaumbwa.
5.Nekuti inoumbwa neyakagadziriswazve epurasitiki nemarara ehuni, inoenderera uye yakasvibirira zvinhu.
6.Pane kugadziridzwa kukuru kwembambo, screws, uye zvekusunga kana zvichishandiswa neWPC zvichienzaniswa nehuni hwepanyama.
7.Iri kuwana mukurumbira sezvo ichidzivirira kutema matanda zvisina basa uye inogadzirwa nemarara nenzira inobatsira zvikuru kugadzira zvigadzirwa zvekuvaka zvakavandudzika.
0.5g / cm3—0.8g / cm3
Tensile simba paKubereka Mpa
Vicat Inopfavisa poindi ° C
Ndeiya yakaita kugadzikana%
Screw yakabata simba N
Choppy Impact Simba KJ / m2
Kushandiswa kwe WPC Sintra Plastiki Sheet
WPC Sintra Plastiki Sheet inoshandiswa kune pasi, madhiri, njanji, fenzi, kugadzirisa nzvimbo, mahwindo, madhoo, ekunze kana ekuvharira mukati, pakugadzira madhoo uye mahwindo emafafitera, ekugadzirira kwakasimba uye kwakagadzirwa zvivakwa, kusanganisa fenicha yepasi, nezvimwe.
Pashure: acrylic girazi jira 4 × 8
Zvadaro: shava PVC 5mm jira
acrylic epurasitiki jira